Home Wararka Aqriso:Kooxda Qiyaano Qaran oo Dadka ku dhaqan Magaalada Muqdisho ku haayo cadaadis...
Aqriso:Kooxda Qiyaano Qaran oo Dadka ku dhaqan Magaalada Muqdisho ku haayo cadaadis xoogan+Caruun iyo Haweyn lugeenaya wadooyinka Xiran
Dadweynaha magaalada Muqdisho ayaa maalinta labaad ee Ciidul fitriga ku qaatay lug ay isaga gooshayaan wadooyinka Muqdisho kadib markii ay ciidamada dowladda xireen jidadka magaalada.
Arrintan ayaa keentay in dad badan ay ka hadlaan xirnaanshaha wadooyinka magaalada, muqdisho oo shacbka dhib xoogan ay klu qabaan.
Xildhibaano ka tirsan DFs ayaa ku tilmaamay xag gudub lagu haayo dadka ku dhaqan muqdisho waxayna shegeyn inaan loo dulqaadan doonini awooda loo istcimaalyo danyarta ku dhaqan muqdisho.
Gabi ahaan wadooyinka magaalada muqdisho ayaa xiran waxeyna dadka maalayan cagahooda si ay ugaaran goobaha loo damaashad tago.
Previous articleXOG:Safarkii Fahad Yaasiin iyo Safarka oo Rw Itoobiya ku yimid Muqdisho maxaa iska quseeyo?
Next articleHab maamuuska Madaxtooyada oo sharaf dhac ku ah qaranimada Soomaaliyeed (Akhriso maxaa dhacay?)
Al-bashiir oo Maanta Maxkamad lasoo taagay (Aqriso)